Fandefasana andro antoandro | Anxt
JEREO NY FANGONDRANTSIKA Eto JEREO NY FANGONDRANTSIKA Eto
Formula Anxt Night
Home / Collections / Best Selling Products / Fanafihana amin'ny antoandro
Fanafihana amin'ny antoandro
HIVIDY AZY IZAO
Miaina fotsiny, manaparitaka ary miala sasatra amin'ny Anxt Daytime Spray - spray voajanahary fnamboarina hanampy anao amin'ny fitantanana ny ahiahinao sy ny ahiahinao isan'andro isan'andro isan'andro.
Fangaro voajanahary voajanahary
Anxt daytime Spray dia misy Ashwagandha, Bacopa Monnieri, Mint, 5-HTP, L-Theanine, Rhodiola Rosea, GABA, ary Lemon Balm.
Ny fangaro rehetra manampy amin'ny fitantanana ny adin-tsaina sy ny fitaintainanana mandritra ny andronao.
Fampiononana sy toky
Ny fangaro ao amin'ny Anxt Daytime Spray dia nofidina hanomezana anao fampiononana sy fanampiana amin'ny fotoanan'ny ahiahy. Anxt Daytime Spray dia manome tanana fanampiana amin'ny fotoana ilain'ny fihetseham-po toy ny talohan'ny resadresaka, sidina, na rehefa mila fanampiana kely ianao.
Haingana sy mora raisina miaraka amina endrika famafazana tsy manam-paharoa, ny tavoahangy Anxt Daytime Spray malaky ary feno tavoahangy natao mba hahafahanao mitondra azy eny am-pandehanana, na aiza na aiza ilanao izany.
Vita ao amin'ny Fanjakana Mitambatra
Namboarina tany Angletera, Anxt Daytime Spray dia mpihinana sakafo vegan sy legioma.
Ahosotra tsiro 2-3 fotsiny ao ambanin'ny lela, miandry 60 segondra ary mitelina voajanahary.
• Fangaro voajanahary voajanahary amin'ny fangaro amin'ny zavamaniry
• 10ml (150 Dos)
• Tselatra 120mm x 15mm tsifotra
• Vitaina any Angletera
• Mpihinana legioma sy vegan
• Drafitra tsy manam-paharoa
• Miaina fotsiny, manafotra ary miala sasatra
Ho an'ny torimaso fitsaharana amin'ny alina, ampiasao miaraka Anxt Capsules.
Ny fomba fampiasana +
Anxt Spray: Ahosotra tsifotra 2-3 ao ambanin'ny lela. Andraso mandritra ny 60 segondra raha miaina amin'ny orona ianao ary mivoaka ny vava. Mazava ho azy fa mitelina aorian'ny 60 segondra. (Aza manondraka mivantana ny masonao na ny tendanao)
Ashwagandha dia ahitra fitsaboana taloha. Ashwagandha dia nampiasaina tamin'ny zavatra maro tao anatin'ny 3,000 taona lasa. Anisan'izany ny fanampiana ny olona hanala ny fihenjanana, manampy amin'ny torimaso ary hampitombo ny haavon'ny angovo.
Bacopa Monnieri dia misy fitambarana mahery izay mety hisy vokadratika. Bacopa Monnieri dia voalaza fa manampy amin'ny fisorohana ny fanahiana sy ny fihenjanana. Heverina ho ahitra adaptogenika izy io, izay midika fa mampitombo ny fanoheran'ny vatanao ny fihenjanana.
Lemon Balm dia ahitra maharitra avy amin'ny fianakaviana mint. Izy io dia misy fananana izay ekena fa misy vokany mampitony.
5-Hydroxytr Egyptophan (5-HTP) dia asidra amine izay mitranga voajanahary ao amin'ny vatanao. Mampiasa azy io ny vatanao mba hamokarana serotoninina, ary ny serotonine ambany dia mety hiteraka korontana amin'ny torimaso sy ny fanahiana. Ny fampitomboana ny famokarana serotonine amin'ny vatanao dia mety misy tombony samihafa.
Ny L-Theanine dia matetika hita amin'ny ravina dite. Asidra amine iray izay nandinihana ny fanadihadiana mialoha dia nahasoa ny fahafahan'ny olona miala sasatra.
Ny asidra gamma-aminobutyric (GABA) dia asidra amina voajanahary voajanahary izay miasa toy ny neurotransmitter ao amin'ny atidohanao. Rehefa miraikitra amin'ny proteinina ao amin'ny atidohanao fantatra amin'ny anarana hoe receptor GABA ny GABA dia miteraka vokatra mampitony izany.
Rhodiola Rosea dia ahitra ao amin'ny fianakaviana Crassulaceae. Ny fitrandrahana Rhodiola Rosea dia nampiasaina hanatsarana manokana ny fanoherana voajanahary ny vatana, araka ny asehon'ny fandinihana ara-tsiansa, amin'ny fihenjanana ara-batana sy ara-pitondrantena miady amin'ny havizanana sy fahaketrahana.